news | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
စာပေစိစစ်ရေးမူသစ်ကြောင့် အထွေထွေစာအုပ်တွေ ရိုက်ပီးမှ တင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတော့ ဒါ မဆလခေတ်ဦးပုံစံပဲ၊ ၁၉၇၀ နှစ်လယ်ပိုင်းကမှစပီး စာအုပ်တွေအကုန် စိစစ်ရေးတင်ရတာ၊ စာပေစိစစ်ရေးရယ်လို့ ဖြစ်လာတာလဲ ဒီတုန်းက ပြန်ကြားရေးက အမ်ဒီ ဗိုလ်တက် (ဆရာတက်တိုး)လက်ချက်မကင်းဘူးလို့ ကြားဘူးတာတွေ ပြန်သတိရတယ်။ ဘယ်သူတွေ သောက်မြင်ကပ်ပုဒ်မထိကြအုံးမယ်တော့မသိဘူး။ မောင်ဖေငယ် စဉ့်ကူးမင်းနဲ့ သေဒဏ်ကျတာလဲ စိစစ်ရေးတင်စရာမလိုထုတ်ပီးမှ ဂိတာပဲ။ သတိတော့ အတော်ကို ကြီးကြီးထားရမယ်။ ဖဆပလလက်ထက် နှိပ်ကွပ်တာထက်ဆိုးတာတွေ လာအုံးမှာကတော့ သေချာနေတယ်။ အကြောင်းရှာဖမ်းတာ၊ အမျိုးစုံယုတ်မာပီး ညှဉ်းတာညှစ်တာတွေပေါ့။ ရွှေဥဒေါင်းကို လေဆိပ်မှာ ဘိန်းရှာခံရအောင် သူ့သားလောက်ရှိတဲ့ ခင်မောင်ကလေးက ပြည်ထဲရေးကိုင်တုန်းနှိပ်စက်သွားတာ သူ့တသက်တာမှတ်တမ်းမှာ တွေ့ကြမပေါ့။ ပျူစောထီးခေါင်းကြီးနဲ့ အဖိုးကြီး ကဆုန်လကြီး ထောင်ထဲတိုက်ပိတ်ခံရသေး။ ဒီလိုညစ်ကျယ်ကျယ်ရူးကြောင်ကြောင် ဖဆပလတွေထက် ဆိုးတာတွေ ခုခေတ်မှာပေါလှပေါ့။ မျိုးချစ်ဆိုတိုင်း နိုင်ငံရေးသမားပညာတတ်ဆိုတိုင်း စိတ်နေမမြင့်တာတော့ […]
Filed under: history, literature, news	| LeaveaComment
လူထုစာအုပ်တိုက်က လူထုဦးလှ၏ သောင်းပြောင်းထွေလာရေးချင်ရာရာစာအုပ်ကို နောက်တကြိမ်ထပ်မံပုံနှိပ်သည်ဟု ကြားရသောအခါ ကျန်းမာရေး၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ခရီးသွား၊ ဟာသ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပုံပြင်မှအစ ကြောင်းရပ်စုံကို စုတ်ချက်သွက်သွက်ဖြင့် ပြန်ပြန်ဖတ်ချင်အောင် နေ့စဉ်နီးပါး ရေးသွားခဲ့သော ဦးလှ၏ကလောင်စွမ်းကို အားကျမိပေသည်။ အိမ်စောင့်ခေတ်တွင် ချိတ်ပိတ်ခံရသော လူထုသတင်းစာကို ၁၉၆၀တွင် ပြန်လည်ထုတ်ဝေချိန်မှစ၍ ယခုခေတ် အင်္ဂလိပ်သတင်းစာဆိုက်ကြီးအရွယ် ဖတ်စရာကဏ္ဍစုံ သတင်းဓာတ်ပုံဝေဆာစွာဖြင့် တိုးချဲ့တင်ဆက်နိုင်လာသည်။ ခေါင်းကြီး ခေါင်းရံပိုင်းအပြင် စာအုပ်ဘာသာပြန်များ၊ ဒေါ်အမာ၏ လှုပ်ရှားနေသောကမ္ဘာ့ရေးရာများ၊ ရွှေဥဒေါင်း၏ တသက်တာမှတ်တမ်း၊ စာအုပ်ဝေဖန်ချက်စသည့် စုံလင်အားပြည့်သော ကဏ္ဍများတွင် လူမှုရေးနယ်ကျယ်ကျယ်လှုပ်ရှားသော ဦးလှ၏ ကလောင်ရွှင်ရွှင်နှင့် မှတ်စရာ စဉ်းစားစရာတွေပါသော သောင်းပြောင်းထွေလာကဏ္ဍကလည်း အထူးတလည်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ လူထုသတင်းစာပါ ဆောင်းပါးများမှ ၃ တွဲအပြင် သတင်းစာပိတ်ခံရပီး ပြည်သူပိုင် ဟံသာဝတီတွင် ရေးသည့်ဆောင်းပါးများကို စုစည်းပီး […]
Filed under: family, news	| LeaveaComment
Burma papers in AAS-ICAS 2011
Alicia’s compilation for burma research google group List of Burma/Myanmar related papers and panels of the program from the Association for Asian Studies (AAS)-International Convention of Asia Scholars (ICAS) joint conference in Honolulu, March 31–April 3, 2011 THURSDAY SESSION 2. 8:00AM-10:00AM Room 315 Technologies of Travel in DefiningaBuddhist Colonial Modernity: Buddhist Agents of […]
Filed under: education, news	|2Comments
Aeit-htiyahood in Modern Burma ဝေဝေနဲ့မမလေးတို့အကြောင်း
Refiguring Women, Colonialism, and Modernity in Burma by Chie Ikeya January 2011, University of Hawai`i Press. ရှမ်း-ဂျပန်အမျိုးသမီး မချိအဲစာအုပ်က စစ်ကြီးမဖြစ်ခင် မြန်မာအမျိုးသမီးလေ့လာမှုမှာ ဒေါ်မီမီခိုင်ရဲ့ The World of Burmese Women (1984) နောက်မှာ ပထမဆုံး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ မြန်မာခေတ်ပြိုင်စာအုပ်စာတမ်းများကိုလဲ လှိုင်လှိုင်ကြီး ကိုးကားလို့ပါ။ ဗမာလို တက္ကသိုလ်ကြည်မာ၊ စောမုံညင်းတို့ အရေးအသားများလောက်ပဲ ဖတ်စရာရှိရာကနေ အခုကိုးကားညွှန်ပြစရာ တအုပ်ထွက်လာပါပီ။
Filed under: Burmese women, history, literature, nationalism, news	| LeaveaComment
Saw Ohn Nyun’s Legacy
PURE GOLD: 50 YEARS OF THE FBA Saw Ohn Nyun V by Gerald Festus Kelly RP GBP 125,000 Prof Dr Maung Maung Nyo- “I was struck by her beauty when I first saw her painting in Glasgow and then in London in the 1960s. Then Daw Mi Mi Khaing told me about her and I […]
Filed under: arts and culture, history, news	| LeaveaComment
Fashioning the Leviathan
Raising Xenophobic Socialism againstaCommunist Threat: Re-reading Lines of an Army Propaganda Magazine in 1950s Burma Bo Bo, Burmese writer (SOAS, University of London) Cultures at War:The Cold War and Cultural Expression in Southeast Asia Tony Day and Maya H. T. Liem, eds. Cornell SEAP,NY,United States, June 2010 Per kind recommendation ofafamily […]
Filed under: history, literature, news, politics	| LeaveaComment